इमेज साप्ताहिक : 2017-09-17
खसी बजार मेलामा ३० लाख रुपैयाँको कारोवार, भेडाच्याङ्ग्राको शिर्षकमा बाहिर जाने रुपैयाँ गाउँमै रोक्न सहकारीहरुको संयुक्त अभियान
तुप्चे । विदुर नगरपालिका वडा नं. ७ तुप्चेमा आयोजित बृहत्त खसी बजार तथा कृषि उपज मेलामा ३०लाख भन्दा बढी कारोकार भएको छ । मेलाबाटै १ सय ३० वटा खसी बोकाको बिक्रि भएको छ । लोकल कुखुरा, फर्सी, लगायतका कृषि जन्य सामाग्रीहरुको पनि विक्रि भएको छ ।
फिकुरीका विष्णु देवकोटाले मेलामा मात्रै २० खसी विक्रि गर्नुभएको छ । पोहोरको भन्दा सस्तोमा खसी बोका विक्रि भएको भएपनि यो मेलाले आफुलाई उत्साही बनाएको उहाँले बताउनुभयो ।
दशैमा तिब्बतबाट आउने भेडा च्याङ्ग्राले नेपाली मुद्रा बाहिर लगेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै तुप्चेका सहकारी संस्थाले बर्षेनी खसी मेलाको आयोजना गर्दै आएको छ । आयोजक संस्था मध्येको हाम्रो सहकारी संस्थाका अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजालले योमेलालो कृषक र ग्राहक दुवैलाई फाईदा मिलेको र सरकारीले उनीहरुको बीचमा समन्वय मात्रै गराउन मेलाको आयोजना गरेको बताउनुभएको छ ।
यो पाली पनि तुप्चेमा रहेका तीन वटा सहकारी संस्थाहरुले खसी बजार मेला सञ्चालन गरेको हो । कृषि प्रधान मुलुकमा दसैंको लागि आवश्यक खसी बोकाको विकल्पमा चीनबाट आउने भेडा च्याङ्ग्रा रहेकोले तुप्चेका सहकारीहरुले पछिल्लो पाँच वर्षदेखि यो अभियान सञ्चालन गर्दै आएका छन् । सोलेबजारमो आयोजना गरिएको वृहत्त खसी बजार तथा कृषि उपज मेलामा उल्लेख्य कृषक तथा उपभोक्ताहरुको सहभागीता रहेको थियो ।
खसी बोका विक्रिको मेलासंगै किसानहरुले उत्पादन गरेका विभिन्न कृषिजन्य सामाग्रीहरुको समेत विक्रि भएका छन् । कृषिजन्य सामाग्रीहरुमा फर्सी, बेसार, लोकल कुखुरा लगायतको बिक्रि भएको थियो ।
गाउँमै पालेको खसी समान मुल्यमा खरिद गरेर यो पालीको दसैंलाई सर्वसुलभ र भब्य बनाउन मेलाले सहयोग पुगेको आयोजकले जनाएको छ ।
ग्रामिण भेगमा उत्पादन भएको कृषि अनाज विक्रि तथा प्रर्दशनीको लागी बृहत्त खसी बजार तथा कृषि मेलामा राखिएको हो । आयोजक संस्थाले सामाग्री विक्रिको लागि राखिने स्टल निःशुल्क उपलब्ध गराएको थियो । खसी विक्रिका लागि आउने कृषकलाई सम्मान समेत गरेको हाम्रो सहकारी संस्थाका ब्यवस्थापक प्रदिप अधिकारीले जानकारी दिनुभएको छ ।
आयोजकले यो पाली विक्रि गर्ने खसीको मुल्य समेत निर्धारण गरेको थियो । जस अनुसार २१ केजी देखि २५ केजीसम्मको खसीको प्रतिकेजी ४ सय रुपैया, २६ केजी देखि ३० केजीसम्मको खसीको प्रतिकेजी ४ सय २० रुपैयाँ मा बिक्रि भएको छ ।
यस्तै, ३१ केसी देखि ३५ केजीसम्मको खसीको प्रति केजी ४ सय ३०, ३६ केजी देखि ४० केजीसम्मको खसीको प्रति केजी ४ सय ४०, ४१ केजी भन्दा माथीको खसीको प्रतिकेजी ४ सय ५० रुपैयाँ र २० केजी भन्दा तलको खसी प्रतिकेजी ३ सय ८० रुपैयाँमा बिक्रि बितरण भएको आयोजक संस्था मध्येको साबिम कृषि सहकारी संस्थाका अध्यक्ष रामप्रसाद नेपालले जानकारी दिनुभयो ।
आयोजक संस्थाले निर्धारण गरेको मुल्य अनुसार नै खसिबोका तथा कृषि अनाजहरुको बिक्रि बितरण भएको थियो । हाम्रो सहकारी संस्थाबाट ऋण लिएर खसी पालन गरेको कृषकहरुले विक्रि गर्न ल्याउने खसीको प्रतिकेजी थप पाँच रुपैयाँ सहकारीले कृषकलाई उपलब्ध गराएको छ ।
पोहोर साल सोही स्थानमा आयोजना भएको वृहत्त खसी बजारमा किसानहरुले सिधै उपभोक्तलाई छ लाख रुपैयाँको खसी बोका विक्रि गरेका थिए । तर यस बर्ष भने खसीबोकाको कारोबार ह्वात्तै बढेको हो । मुल्य निर्धारण सहित कृषकलाई विक्रिको लागि आउन आग्रह गरेकोले विक्रि भएको अनुमान गरिएको छ । साथै मेलामा ल्याएको कृषकको खसी बोका विक्रि नभएमा आयोजकले नै किनेर राख्ने जनाएपछि कृषकहरुले ठुलो संख्यामा खसी बोका आयोजना स्थलमा ल्याएका हुन् । पोहोर साल ६० वटा खसी विक्रि भएको थियो भने यस बर्ष १ सय ३० वटा खसीबोकाको बिक्रि भएको छ । त्यत्तिका संख्यामा खसी विक्रिका लागि ल्याउदा पनि ग्राहकको माग धान्न नसकेको आयोजकले बताएको छ ।
ढिला पुगेका कारण खसी बोका खरिद गर्न नपाएका उपभोक्तालाइ सम्पर्कमा रहन र भोली पनि कृषकसंग सम्पर्क गरेर खसी उपलब्ध गराउने आयोजकले आग्रह गरेको छ ।
दशैंको अवसरमा तुप्चेको सोलेबजारमा सम्पन्न भएको बृहत्त खसीबजार तथा कृषि उपज मेलाको आयोजना हाम्रो सहकारी संस्था लिमिटेड, साविम कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड र सहायता सामुदायिक उद्यमी महिला सहकारी संस्था लिमिटेडले संयुक्त रुपमा गरेको हो ।
यस्तै अर्को साल यो मेलालाई व्यवस्थित गर्दै कृषकले विक्रिका लागि ल्याउने खसी, बोका, कुखुरा तथा अन्इ कृषि उत्पादनहरुलाई सहकारीले नै खरिद गर्ने र सोही मुल्यामा उपभोक्तालाई विक्रि गर्ने भएको छ ।
Posted by image weekly (इमेज साप्ताहिक) at Saturday, September 23, 2017 No comments:
विवेकशिल साझा पार्टीले नुवाकोटबाट पनि उम्मेदवारी दिने
विदुर । विवेकशील साझा पार्टी नुवाकोटले अगुवा कार्यकर्ताहरुसित अन्र्तक्रिया गरेको छ । कार्यक्रममा विवेकशील साझा पार्टीको केन्द्रिय सदस्य गोविन्द नारायण र दिनेश प्रसाईको उपस्थिति रहेको थियो । कार्यक्रममा बोल्नुहुँदै विवेकशीला साझा पार्टीका केन्द्रिय सदस्य गोविन्द नारायणले नेपाललाई खराव राजनीतिक संस्कारले बिगारेको र अवको नयाँ पुस्ता राजनीतिमा नउत्रिएसम्म देशले मुहार नफर्ने बताउनुभएको छ ।
त्यस्तै अर्का केन्द्रिय सदस्य दिनेश प्रसाईले नयाा मात्रै बनेको र देश बन्न नसकेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले नुवाकोटमा पनि ठुला नेता मात्रै रहेको र नागरिकको अवस्था उस्तै रहेकोमा अचम्म मान्नुभयो । विकास निर्माण देखि धेरै कुरामा पछाडी रहेको नुवाकोटको सम्वृद्धिका लागि युवा पुस्ताको सक्रियता आबश्यक रहेको बताउनुभयो ।
कार्यक्रमाम सहभागि अगुवा कार्यकर्ताहरुले नुवाकोटमा विवेकशील साझा पार्टीको विस्तारको लागि गर्न सकिने कार्यक्रमको विषयमा छलफल र समीक्षा गरेको अगुवा नेता विमल तामाङले बताउनुभएको छ । तराजु चिन्ह रहेको विवेकशील साझा पार्टीले आशन्न प्रदेश र संघिको निर्वाचनमा प्रत्यक्षमा उम्मेदवारी दिने पनि निर्णय गरेको छ । जिल्ला अधिवेशन र उम्मेदवारको विषयमा दसैं पछि छलफल गरिने दामोदर नेपालले जानकारी दिनुभएको छ ।
नुवाकोटबाट साहित्यमा नयाँ प्रयोग, रचना वाचन गर्नेलाई हातहातै पारिश्रमिक
विदुर, नुवाकोटबाट नयाँ साहित्यिक अभियानको सुरुवात भएको छ । बासिवियाँलो नुवाकोटले आज आयोजना गरेको कार्यक्रममा साहित्यिक रचना वाचन गर्ने श्रष्टाहरुलाई पारिश्रमिक प्रदान गरेको छ ।
विजया दशमी २०७४ को शुभकाना आदान प्रदान र साहित्यिक रचना वाचन कार्यक्रम कविता, जगल वाचन गर्ने साहित्यकारहरुलाई एक सय एक रुपैयाँ प्रदान गरेको छ । कार्यक्रममा २४ जना नुवाकोटका श्रष्टाहरुले साहित्यिक रचना सुनाएका थिए । त्यस्तै अमेरिका, साउदी अरब र काठमाडौंमा रहेको नुवाकोटका श्रष्टाहरुसंग भिडियो कल गरेर प्रत्यक्ष रुपमा रचना सुनाइएको थियो ।
बसिबियाँलाको दोश्रो जमघट अन्र्तगत आउनुहोस्, सुन्नुहोस् सुनाउनुहोस् श्रृङ्खला अन्र्तगत एक सय १ कविता कार्यक्रममा २८ जना कविले आफ्ना रचना सुनाए ।
कार्यक्रममा विदेशमा रहनुभएका दुई जना र काठमाडौ.बाट उक जनाले फेसबुकको म्याजेन्सरमा भिडिओ कलबाट कविता वाचन गरेर सुनाएका थिए । साउदी अरवबाट लिखुका नवराज लामिछाने र अमेरिकाबाट पुरुषोत्तम ढकालले कविता वाचन गर्नुभएको हो । त्यस्तै काठमाडौंबाट लक्ष्मी रुम्वाले दसैंसंग सम्वन्धित कविता वाचन गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा बोल्नुहँदै प्मुख अतिथि साहित्यकार शम्भुप्रसाद शर्माले नुवाकोट जिल्ला अन्य क्षेत्रमा जस्तै साहित्यमा पनि अब्बल रहेको र अवका दिनमा साहित्यिक गतिविधिलाई बढाउनु आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।
त्यस्तै महामण्डल त्रैमासिक साहित्यकि पत्रिकाका सम्पदाक श्रीराम श्रेष्ठले साहित्यकारहरुलाई रचना वाचन वापत पारिश्रमिक दिने कार्य नयाँ रहेको र यो अभियानले सबैलाई उत्साहि पार्ने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा सभापति तथा बसिवियाँलो नुवाकोटका अभियन्ता हरिकृष्ण श्रेष्ठले साहित्यकारहरुको कदर गर्न र साहित्यलाई ब्यवसायिकता दिनको लागि यो अभियान थालेको बताउनुभएको छ ।
कार्यक्रममा रचना वाचन गर्नेहरुले बढी दसैं केन्द्रिय सृजना सुनाएका थिए । बाल्यकाल र युवाअवस्थामा हुने दसैंको फरकपनलाई बोध गराउने कविता पनि रहेको थियो । कतिपया कविहरुले कार्यक्रम स्थलमै कविता लेखेर सुनाए । कविता वाचन गर्ने श्रष्टाहरुमा बाबुराम लामिछाने, कपिलदेव खनाल, क्षितिज थापामगर, राजकुमार पुत्ला, मुकुन्दराज अर्याल, सुमित्रा सुमी। रामकृष्ण गजुरेल, शिवसुन्दर पुडासैनी, बद्रीविन्द गजुरेल, आशिक भट्ट, कविन्द्र घिमिरे, अमंग शाक्य, कृष्णचन्द्रसिंह प्रधान, तिर्थराज खनाल, राधव सापकोटा, श्रयिा रिमाल, सोविन रिमाल, लोकबहादुर पुडासैनी, काजी खान, श्रीधर पाण्डे र विष्णुहरिरिमालले रचना वाचन गरे ।
कार्यक्रmमा मुस्लिम धर्मालम्वीले समेत कविता वाचन गर्दै हिन्दुहरुको ठुलो चाड दसैंको शुभकामना व्यक्त गरेका थिए ।
Posted by image weekly (इमेज साप्ताहिक) at Friday, September 22, 2017 No comments:
करोडौ लगानीमा पोल्ट्री फर्म सञ्चालन
ककनी । नुवाकोटको ककनी गाउँपालिका वडा नंं ५ भोट थानसिंगका कृष्णबहादुर लामा र मजुवाका कृषक धनराज लामाले व्यवसायीक रुपमा कुखुरा पालन गरेको १० वर्ष भएको छ । बजारमा मासुको माग बढ्दै गएपछि उहाँले थाल्नुभएको बोइलर कुखुरा पालनले स्थानीय बजारमा मासुको मागलाई पुर्ती गर्नथाल्यो । कृष्णबहादुर लामाले बुद्ध कृषि फर्म र धनराज लामाले धनराज कृषि फर्म १० वर्षदेखि सञ्चालनमा ल्याउनुभएको छ ।
यो संगै उहाँहरुले नेपाल सरकारसंगको सहकार्यमा यो सालबाट उप आयोजना सञ्चालन गर्नुभएको छ । एक करोड रुपैयाँ भन्दा बढी लागतमा तयार भएको पोल्ट्रि फर्मले उपभोक्ताको स्वास्थ्यका लागि समेत चेतनामुलक कार्य गर्ने भएको छ ।
ककनी गाउँपालिका वडा नं. ५ भोट थानसिंगमा रहेको बुद्ध कृषि फर्म र मझुवामा रहेको धनराज पोल्ट्री फर्मले पोल्ट्री, कृषि विकास मन्त्रालय ब्यवसायीक कृषि तथा ब्यापार आयोजनाको संयुक्त लगानीमा ब्यवसायीक कुखुरा उत्पादन तथा बजारीकरण उप आयोजना सञ्चालन गरेको हो ।
एक करोड २१ लाख रुपैयाँको लागतको उप आयोजना दुवै पोल्ट्री फर्मले छुट्टाछुट्टै सञ्चालन गरेको छ । जसमा ब्यवसायिक कृषि तथा ब्यापार आयोजनाबाट दुवै फर्मलाई ३४ लाख ८१ हजार रुपैयाँ लगानी भएको छ । बाँकी रकम पोल्ट्री फर्मले लगानी गरको बुद्ध पोल्ट्री फर्मका सञ्चालक धनराज लामालेकृष्णबहादुर लामाले बताउनुभयो ।
आयोजना सञ्चालनमा आएसंगै बुद्ध र धनराज पोल्ट्री र्फमले तीन÷तीन वटा ठूला कुखुराको खोर निर्माण गरेको छ । उक्त खोरमा बुद्ध पोल्ट्री फर्मले १० हजार र धनराज पोल्ट्री फर्मले पनि १० हजार कुखुरा पालिने बताइएको छ । कुखुराको लागि आवश्यक दाना भण्डारणको लागि समेत छुट्टै घर तयार भएको छ । बुद्ध पोल्ट्री फर्मले बार्षिक साढे दुई लाख किलो मासु उत्पादन गर्ने प्राविधिकहरुले बताएका छन् । सोही परिणाममा धनराज पोल्ट्री फर्मले पनि मासु उत्पादन गर्ने बताइएको छ ।
उन्नतजातका कुखुरा पालन र बढी मासु उत्पादनका लागि आवश्यक पर्ने यन्त्रहरु पनि खरिद गर्ने पोल्ट्री फर्म सञ्चालक धनराज लामाले बताउनुभएको छ । बुद्ध पोल्ट्री फर्म र धनराज पोल्ट्री फर्मले कुखुरा पालन मात्रै नभई उपभोक्ताहरुको स्वास्थ्यका लागि ख्याल गर्नुपर्ने कुरालाई समेटेर वृत्तचित्र समेत तयार गरेर प्रर्दशन गर्ने बताइएको छ । साथै मासु प्रयोग, कुखुरा पालनको विषयमा समेत उप आयोजना अन्र्तगत बार्षिक रुपमा सार्वजनिक सुनुवाई गर्ने धनराज पोल्ट्री फर्मका सञ्चालक धनराज लामाले बताउनुभएको छ ।
Posted by image weekly (इमेज साप्ताहिक) at Thursday, September 21, 2017 No comments:
न्यायाधीशको प्रस्ताव ‘पेण्डुलम’
न्याय क्षेत्र समन्वय समिति नुवाकोटले भदौ ३०, २०७४ मा जिल्ला अदालत नुवाकोटमा राखेको बैठकमा तीन वटा अर्धन्यायिक निकायका प्रमुख नै उपस्थित भएनन् ।
बैठकमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, मालपोत अधिकृत र जिल्ला वन अधिकृत नगएर प्रतिनिधि पठाए । बैठकमा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश लोकजङ्ग शाह, श्रेष्तेद्धार महिमानसिंह विष्ट, नुवाकोट प्रहरीका प्रमुख प्रहरी उपरिक्षक बिरेन्द्रकुमार बस्याल, जिल्ला समन्वय समितिका स्थानीय विकास अधिकारी केशरबहादुर पण्डित र नुवाकोट वारका अध्यक्ष देवराज कँडेल उपस्थित थिए ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयको तर्फबाट शाखा अधिकृत नन्दलाल शर्मा र जिल्ला मालपोत कार्यालयका तर्फबाट सुब्बा रामेश्वर धिमाल र जिल्ला वन कार्यालय बाट सहायक वन अधिकृत राजकुमार यादव सहभागी भए । प्रमुख जिल्ला अधिकारी बराल र मालपोत कार्यालयका निमित्त प्रमुख बुद्धिलाल श्रेष्ठले ‘कार्य ब्यस्तता’ देखाएर बैठकलाई महत्व दिएनन् । वन अधिकृत पदमराज नेपाल शुक्रवार काठमाडौं रहेकोले बैठकमा अनुपस्थित रहे ।
बैठकका लागि ७ वटा प्रस्ताव राखिएको भएपनि यस इमेज साप्ताहिकको अघिल्लो अंकमा प्रकाशित ‘अदालतले कानून मानेन’ शिर्षकको समाचारको विषय छलफल केन्द्रित गर्ने प्रयास गरिएको थियो । तर, समाचारले उठाएको विषयवस्तुसंग सरोकार राख्ने दुई वटा कार्यालयका प्रमुखले नै महत्व नदिएपछि प्रस्तावमाथी गतिलो छलफल हुनै पाएन । बैठकमा सहभागिका अनुसार न्यायाधीश शाहबाट प्रमुख जिल्ला अधिकारी उपस्थित हुनै पर्ने भन्दै केही बेर बैठकलाई अड्काए ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारीले प्रतिनिधि तोकेर पठाएपनि ‘प्रमुख जिल्ला अधिकारी नै चाहिने’ भन्दै न्यायाधीशले फोन गर्न लगाए । प्रशासनका शाखा अधिकृत शर्माले आफुले १५ पटक प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई फोन गर्दा नउठेको जवाफ दिए । न्यायाधीशले १६ औं पटक पनि फोन गर्न उनलाई आग्रह गरेका थिए । त्यसबेला प्रजिअ बराल नयाँ शक्ति नुवाकोटले विदेशमा रहेकाले मतदान गर्न पाउने माग गर्दै ल्याएको ज्ञापन पत्र बुझेर बसिरहेका थिए ।
उता, जिल्ला मालपोत कार्यालयका निमित्त प्रमुख बुद्धिलाल श्रेष्ठ पनि कार्यालयमै थिए । लालपुर्जामा सही गरेर बसीरहेका उनीले पनि ५५ मिटर पर अदालतमा चलिरहेको बैठकमा ‘जानै भ्याएनन्’ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारीे र मालपोत प्रमुख बैठकमा सहभागि नभएपनि सुरु भएको वैठकमा बारका अध्यक्षले आफ्नो धारणा राखी बाहिरिए । बैठकमा रहेका सदस्य पनि हिड्ने र जिम्मेवार ब्यक्तिनै बैठकमा सहभागि नहुने भएपछि अदालतका श्रेस्तेदार महिमानसिंह विष्टले प्रस्ताव सुनाएका थिए । ७ वटा प्रस्ताव मध्ये सातौं नम्वरमा ‘अदालतको नाममा दर्ता हुुपर्नेे जग्गाको पत्रिकाबाजी’ को विषय थियो । उक्त सूचना कसरी बाहिर गयो र समाचार बन्यो भन्ने विषयमा छलफल गर्न प्रस्ताव राखिएको थियो ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी र मालपोतका निमित्त प्रमुखले अदालतलाई नटेरेको रेडिमेड धारणा सहित बसेका जिल्ला न्यायाधीश ‘आक्रोश पोख्ने मुडमा’ देखिएपनि प्रमुख जिल्ला अधिकारी र मालपोत प्रमुख नआएपछि प्रस्ताव पेण्डुलम भएको ति सहभागि सदस्यले बताए ।
त्यस्तै, आफ्नो नियममित र कार्यक्षेत्र भित्रै रहेको अर्धन्यायिक निकायको अनुगमन गर्न पाउने कार्यलाई पनि जिल्ला न्यायाधीशले प्रस्तावका रुपमा बैठकमा राखे । छटौं नम्वरमा रहेको अर्धन्यायिक निकायको कामको छड्के जाँच गर्ने र आकस्मिक अनुगमन गर्ने प्रस्ताव पनि सुनाउने काम मात्रै भएको श्रोतको दावी छ । उक्त निर्णय गराउने भन्दा पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारी र मालपोतका निमित्त प्रमुखलाई सुनाएर मनोबैज्ञानिक दवाब सृजना गर्ने र जग्गा अदालतको नाममा दर्ता गराउने मनोविज्ञान न्यायाधीशको रहेको बताइएको छ ।
‘पाँच वटा प्रस्तावहरू सामान्य र अघिल्लो पटक नै बैठकबाट निर्णय भइसकेको विषयलाई फेरि प्रस्ताव बनाएर ल्याइएको थियो, श्रोत भन्छ – ‘अन्य प्रस्ताव बाहाना थिए, प्राथमिकता र केन्द्रित चााही अघिल्लो हप्ताको समाचार नै थियो ।’
बैठकमा सहभागि अर्का एकले न्यायाधीश र श्रेस्तेदारले गर्ने कार्य र व्यवहारको विषयमा नागरिक जानकार हुन नहुने र पत्रकारले चासो राख्न र लेख्न नपाउने तानाशाह शैलीको बाटोमा हिडेको टिप्पणी गरे । यी सबै बिषयलाई उनीहरू अदालतको अपहेलनाको ‘भुत’ देखाएर तर्साउने कोशिषमा रहेको उनको भनाई छ । ‘सूचना बाहिरिएको विषयलाई बैठकको प्रस्ताव बनाएर नागरिकको सूचनाको हक संकुचित गर्ने मनशायमा न्यायाधीश देखियो’ उनले भने ।
किन गएनन् सिडिओ, मालपोत र बन अधिकृत ?
न्यायाधीशको ‘इन्ट्रेष्ट’मा शुक्रवार बसेको न्याय क्षेत्र समन्वय समितिको बैठकको जानकारी प्रमुख जिल्ला अधिकारी जगदीशराज बराललाई बुधवार नै थियो । लिखित रुपमा पत्र प्राप्त हुँदा पनि उनले बैठकमा सहभागि हुने रुची पटक्कै नदेखाएको प्रशासनको एक कर्मचारीले बताए ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय नुवाकोटको नाममा दर्ता रही जिल्ला अदालतको आवसीय भोग चलनमा रहेको जग्गा आफ्नो नाममा नामसारी गरिदिन जिल्ला अदालतले मालपोत कार्यालयलाई कानून विपरित दवाव दिएपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी जिल्ला न्यायाधीश लोकजङ्ग शाह र श्रेष्तेदार महिमानसिंह विष्टसंग नकारात्मक बनेको कर्मचारीहरू बताउछन् । यही बारेमा अदालत र जिल्ला प्रशासन कार्यालयको पत्र गृह मन्त्रालयसम्म आउने जाने क्रम सुरु भएको छ ।
पटक पटक मालपोतलाई जग्गा दर्ता गर्न लिखित र मौखिक दवाव दिएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय नुवाकोटले यो विषयलाई लिएर गृह मन्त्रालयसंग समेत परामर्श थालेको छ । श्रेष्तेदार विष्टले टिप्पणी उठाउने र जिल्ला न्यायाधीशले सोही टिप्पणी माथी फैसला गर्दै प्रशासनको जग्गा अदालतको नाममा गर्न निर्देशन दिएपछि प्रजिअ ‘अदालतले कानून अवलम्वन नगरेको’ भन्दै विपक्षमा उभिएका छन् । उनीलाई अदातलका श्रेस्तेदार महिमानसिंह विष्टले यो विषयमा भेटेरै जग्गा अदालतको नाममा नभए ‘अपहेलनामा कारबाही गर्ने’ भनेर धम्क्याएका छन् ।
अदालतको अपहेलनालाई अगाडी सारेर त्रास सृजना गर्ने र अबैध रुपमा जग्गा कब्जा गर्ने रणनीतिमा लागेको जिल्ला न्यायाधीश र श्रेष्तेदारबाट न्याय नहुने भन्दै प्रजिअ जगदीशराज बराल बैठकमा सहभागि भएनन् । समाचार श्रोतका अनुसार शुक्रवारको बैठकमा न्यायाधीश लोकजङ्ग शाह जग्गा लिइ छाड्ने ढङ्गबाट उत्रने र आफु प्रक्रृया भन्दा बाहिरबाट जग्गा दिन नचाहने भएकोले सम्भावित चर्काचर्कीको अनुमान गर्दै बराल बैठकमा अनुपस्थित भएको अनुमान छ । मालपोत निमित्त प्रमुख बुद्धि लाल श्रेष्ठले पनि बैठकमा नजाने विषयमा केही व्यक्तिसित परामर्श गरेको बुझिएको छ । बैठकमा सहभागि हुँदै जग्गा दर्ता नगरेको विषयमा सिधै न्यायाधीशको हप्की खानु पर्ने भएकोले उनले प्रतिनिधि पठाउने उपाय निकालेका हुन् ।
उनलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारी पनि बैठकमा सहभागि नहुने जानकारी अनौपचारिक रुपमा थियो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी समेत बैठकमा नजाने भएपछि उनलाई प्रशस्त बल मिलेको थियो । जग्गाको विषयमा निमित्त प्रमुख श्रेष्ठ पेलिएका छन् ।
प्रशासनले पत्रचार गरेर फिल्डबुकमा आफ्नो नाममा दर्ता रहेको उक्त जग्गाको पुर्जा आफ्नो नाममा मागिरहेको छ । जिल्ला अदालतले २०२८ सालदेखि आफ्ना कर्मचारीले भोगचलन गर्दै आएकोले अदालतकै नाममा पुर्जा बनाउन निर्देशन दिएको छ ।
यो विषयमा निर्णय लिन नसकेपछि मालपोतका निमित्त प्रमुखले यसको फाईल विभागमा पठाएका छन् । तर, अदालतको आदेश पालना नगरेको भन्दै निमित्त प्रमुख श्रेष्ठलाई अपहेलनामा कारबाही गर्ने र जागिरबाटै हटाउन प्रक्रृया थालिने भनेर अदालतका श्रेष्तेदार महिमानसिंह विष्टले मौखिक रुपमै धम्याएका छन् ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी बराल जस्तै निमित्त प्रमुख श्रेष्ठ पनि अदालतले प्रक्रिया भन्दा बाहिरबाट जग्गा हडप्न खोजेको र मानासिक रुपमा तनाव दिएको बताउँछन् ।
(श्रेष्ठलाई धिम्किदिएको बारेमा इमेज साप्ताहिकको अघिल्लो अंकमा प्रकाशन भएको छ ।)
न्यायाधीश सिडिओ सम्बन्ध
जिल्ला न्यायाधीश लोकजङ्ग शाह र प्रमुख जिल्ला अधिकारी जगदीशराज बरालको सम्बन्ध चिसिएको छ । औपचारिकताका लागि सामान्य बोलचालमा रहेको उनीहरू एकअर्कालाई आमनेसामने देख्न रुचाउदैनन् । दुई बीचको चिसो सम्वन्ध सार्वजनिक रुपमै देख्न थालिएको छ । अदालत र प्रशासनबीच अहिले मौखिम संवाद भन्दा पत्र संवाद गहिरो छ । न्यायाधीश र प्रजिअ साउन ४, २०७४ यता मौखिक भन्दा पत्रबाट बढी बोलिचाली गर्दै आएका छन् ।
जगदीशराज बराल प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जिम्मेवारी सम्हाल्न नुवाकोट आएको आज सोमवार १०० दिन भएको छ । त्यस्तै जिल्ला न्यायाधीश लोकजङ्ग शाह नुवाकोट आएको सात महिना भएको छ । न्यायाधीश शाह यस अघि २०६५ सालमा सरकारी वकिलको कार्यालय नुवाकोटमा सरकारी वकिलको पदमा कार्यरत थिए । उनी ८ महिना पछि २०६६ को सुरुको समयमै नुवाकोटबाट न्यायाधीश पदमा बढुवा भई बर्दिया जिल्लामा सरुवा भएका थिए ।
भदौ १९, २०७४ मा जिल्ला अदालत नुवाकोटको भवन शिलान्यस समारोहमा न्यायाधीश शाहले प्रजिअ बराललाई ‘इग्नोर’ गरे । प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली सहभागि गरिमामय सभामा स्वागत मन्तब्य दिन उभिएका न्यायाधीशले सामान्य कर्मचारीलाई समेत सम्वोधन गरे,
तर प्रमुख जिल्ला अधिकारी बराललाई गरेनन् । आफ्नो मन्तब्य टुङ्याएर प्रजिअको नाम छुटेकोमा न्यायाधीशले माफी माग्दा हल हाँसोले गुञ्जियो ।
सोही कार्यक्रममा नुवाकोट वारका कुनै पनि पदाधिकारी उपस्थित भएनन् । उक्त भब्य कार्यक्रममा बारको पदाधिकारी सहभागी नहुनुले बार–बेञ्चको दुरी बढ्दै गएको शंकेत गरेको छ । अपमानको महसुस गरेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बराल कार्यक्रम पछि एक्लैजस्तो बसेका थिए । कार्यक्रममा सम्वोधन छुटेको विषयमा र कार्यक्रमको विषयमा न्यायाधीश र प्रमुख जिल्ला अधिकारी बीच पछि सामान्य भलाकुसारी पनि भएन । प्रमुख जिल्ला अधिकारी बराल प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीका स्वकिय सचिव रामप्रसाद पौडेलसंग छुट्टै टेबुलमा बसेर खाजा खाए र होटलबाट बाहिरिए ।
त्यसको तीन दिन पछि भदौ २२ गते बिदुरमा आयोजित निजामती कर्मचारी दिवसमा विशेष अतिथिको आसनमा रहेका न्यायाधीशलाई ‘कम्फर्ट’ देखिएको थिएन । जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख सन्तमान तामाङ प्रमुख अतिथि रहेको उक्त कार्यक्रममा मन्तब्य राख्ने क्रममा न्यायाधीश शाहले उक्त कार्यक्रममा विशेष अतिथिको भुमिकामा राखिएको प्रति पटक पटक आयोजकलाई विशेष आभार सहित धन्यवाद दिए । कार्यक्रमा सहभागि निजमती कर्मचारीहरूका अनुसार न्यायाधीशलाई विशेष अतिथि बनाइएकोमा भित्री पिडा थियो ।
उक्त कार्यक्रमको सभापति प्रमुख जिल्ला अधिकारी बरालनै थिए । सो कार्यक्रममा बोल्नेका लागि माइक र स्पिकर नराखिएको प्रति पनि न्यायाधीश शाहले आयोजकलाई ब्यङ्ग्य गरेका थिए ।
Posted by image weekly (इमेज साप्ताहिक) at Sunday, September 17, 2017 No comments:
आजबाट महोत्सव सुरु
त्रिशुली, नेपालीहरूको महान पर्व दशैं र तिहारलाई लक्षित गरी सञ्चालन गर्न लागिएको दोश्रो ‘नुवाकोट दशैं महोत्सव–२०७४’को तयारी तिब्र बनाएको छ । महोत्सवको उद्घाटन आज सोमवार भब्य समारोहका बीच त्रिशुली स्कुलको खेल मैदानमा हुनेछ ।
‘विबिध सास्कृति मनोरञ्जनात्मक सस्तो सुलभ बजार’ भन्ने नाराको आज सोमवारदेखि ११ गतेसम्म सञ्चालन गर्न लागिएको दोश्रो ‘नुवाकोट दशैं महोत्वस–२०७४’को आवश्यक सबै तयारी पूरा भएको आयोजकले जनाएको छ । महोत्सवको लागि एक सय २५ वटा स्टल निर्माण भएको छ ।
महोत्सवको स्टलमा दशैको लागि आवश्यक सबै खाद्य सामाग्री राख्ने व्यवस्था आयोजकले मिलाएको छ । मेलामा साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनले चिनी, चामल, ग्याँस लगायतका सामाग्री राख्ने बताइएको छ । मेलामा राखेको ग्याँसको मूल्य अहिले बजारमा तिर्नुपर्ने मूल्य भन्दा केहि सस्तो हुने आयोजक समितिका संयोजक शिब खड्गेले बताउनु भयो ।
यस्तै, महोत्सवमा सहभागिहरूलाई चर्चित हास्य कलाकार, लोक गायक, आधुनिक तथा पप गायकहरूले पनि भरपूर मनोरञ्जन दिने महोसत्व आयोजक समितिका सल्लाहाकार नबिन्द्रमान प्रधानले बताउनु भयो ।
महोत्सवमा स्थानीय सिपकला, चित्रकला, बास्तुकलाका सामाग्रीहरू, लत्ताकपडा, खाद्यान्न सामाग्रीको सहज उपलब्धता मिलाउन आयोजकले उपसमिति गठन गरेर काम अगाडी बढाएको छ ।
दोश्रो नुवाकोट दशैं महोत्वसमा नुवाकोट र रसुवाका नागरिकहरूलाई दशै र तिहार पर्वको लागि एकै स्थानबाट आवश्यक सामाग्रीहरूको सहज उपलब्धता गराउने लक्ष्य रहेकाले दशैको किनमेलको लागि उपयुक्त स्थानको रुपमा महोत्सव आयोजना गरिएको स्थलान त्रिशुली स्थित त्रिभुवन त्रिशुली माबिको खेल मैदानमा करीब ५० हजार अवलोकनकर्तालाई भित्र्याउने आयोजकले बतायो ।
चाडपर्वलाई लक्षित गरी आवश्यक सबै प्रकारको सामाग्रि राखेर सञ्चालन गर्न लागिएको महोत्वसले सस्तो र सुलभ बजार तथा चाडपर्वको समयमा हुँदै आएको कालोबजारी नियन्त्रणमा समेत सहयोग पुग्ने महोत्वस आयोजक त्रिशुली युथ स्पोर्टस् क्लबका अध्यक्ष शिव खड्गेले जानकारी दिनुभएको छ ।
महोत्सब स्थलसम्म जानको लागि सार्वजनिक यातायातका साधनको समेत व्यवस्था मिलाइ सकेको आयोजकले जनाएको छ । चाडपर्वको समयमा बजारमा आएका नयाँ उत्पादित लत्ता कपडा, विद्युतीय, खाद्यान्न समाग्रिको समेत स्टलहरूमा राख्ने आयोजकले जनाएको छ ।
महोत्सवमा शिखरवेशीको चामल, ककनीको मुला, जिल्लाको विभिन्न गाँउमा उत्पादन हुदै आएको ट्राउट माछा, राख्ने आयोजकले जनाएको छ ।
विश्व किर्तिमानको तयारी
विदुर, नुवाकोटको एक व्यक्ति ८४ घण्टासम्म लगातार प्रवचन दिएर विश्व किर्तिमान कायम गर्ने तयारीमा रहेका छन् ।
शिवपुरी गाउँपालिका वडा नं. १ तलाखुका ४५ वर्षिया अनन्तराम केसीले वल्र्ड रेकर्ड तोड्नका लागि आफ्नो कार्यक्रम राख्नुभएको छ । उहाँले असोज १९ गतेबाट काठमाडौंको टेक्सास इन्टरनेशनल कलेज चावहिलमा गिनिज वल्र्ड रेकर्डका लागि आधिकारीक व्यक्तिहरूको उपस्थितिमा प्रवचन दिनुहुने छ ।
योग तथा आध्यामिक साधक, उत्प्रेरक वक्ता तथा मेमोरी मास्टरको रुपमा चिनिनुभएको अनन्तराम केसीले मेमोरि एण्ड माइन्ट पावर टेनिङ्ग सेन्टरबाट यो विश्व किर्तिमानी राख्न र गिनिज बुकमा नाम लेख्न लाग्नु भएको हो ।
यस अघि भारतका एक व्यक्तिले यही विधामा ७५ घण्टा ३२ मिनेट प्रवचन दिएर विश्व किर्तिमान काय गरेका थिए । उनको यो रेकर्डलाई फराकिलो समय अन्तरले तोड्नका लागि नुवाकोटका अनन्तराम केसी लाग्नुभएको हो ।
गिनिज बुकमा वल्र्ड रेकर्ड कायम गराएर नाम लेखाउनका लगि उहाँले काठमाडौंमा आयोजना गर्नुभएको उक्त समारोहका लागि झण्डै २३ लाख रुपैयाँ खर्च हुने बताइएको छ ।
शहरी खानेपानी आयोजनामा अनियमितता
विदुर, विदुर नगरपालिकाभित्र बृहत् खानेपानी आयोजना सञ्चालनका लागि तेस्रो साना शहरी खानेपानी आयोजना मार्फत भइरहेको पाइप विस्तारको काममा अनियमितता भएको पाइएको छ ।
प्रयोग गर्नु पर्ने भन्दा कम गुणसतर र कम क्षमताको पाइप राखेको उपभोक्ताले पत्ता लगाएपछि अहिले केठेदार कम्पनीले उक्त पाइप रातारात फेरेको छ । तल्लो पीपलटारका बासिन्दाको घरघरमा विस्तार गर्न बिछ्याइरहेको पाइप १० किलो प्रेसरको जडान हुनुपर्नेमा छ किलो प्रेसरको मात्र जडान गरेको उपभोक्ताले बताएका छन् ।
ठकेदेरालाई यो विषयमा जानकारी गराउदा पनि जवर्जस्ती पाइप पुरको थियो । तीन दीन अघि प्राविधिक सहित उपभोक्ताहरूले पाइपको गुणस्तर र सम्झौतामा भएको शर्त जाँच गर्दा बसमासी गरेको पाइएको हो ।
स्थानीय मानबहादुर डंगोलका अनुसार काममा बदमासी भएको प्रमाणित भएपनि ठकेकेदार कम्पनीले पाइप रातारात बदलेर फेरि पुरेको छ । यो घटनासंगै विदुर नगरपालिका भित्र बृहत् खानेपानी आयोजना सञ्चालनका लागि तेस्रो साना शहरी खानेपानी आयोजना अनियमितता भईरहेको कुरा बाहिर आएको छ ।
करिब ८१ करोड रुपैयाँको लगानीमा निर्माणाधीन उक्त आयोजनामा अनियमितताको विवाद भएपछि केही दिन काम प्रभावित भएको थियो । आयोजना अन्तर्गत उपभोक्ताको घरसम्म विस्तार गरिएको पाइपको मोटाई तोकिएको भन्दा कम र बिछ्याउन कम गहिराइको खाल्डो खनिएकाले छानबिनको माग गर्दै उपभोक्ताले काम रोकेका थिए ।
ठेकेदार कम्पनी टुण्डी कन्स्ट्रक्सन प्रालिले गरिरहेको पाइप विस्तार अन्तर्गत विदुर नगरपालिका–५ पीपलटार सहित आसपासको स्थानमा तोकिएको भन्दा कम मोटाइको पाइप प्रयोग गरेको र पाइप पुर्न कम गहिराइएको खाल्डो बनाएको भन्दै उपभोक्ताले विरोध जनाएका हुन् ।
तेस्रो साना शहरी खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना मार्फत ठेकेदार कम्पनी टुण्डीले गरिरहेको निर्माण कार्य पारदर्शिता नभएको र सञ्चालन कार्यक्रम बारे उपभोक्तालाई नै जानकारी नभएको एक जना स्थानीय उपभोक्ताले बताएका छन् । विदुर नगरपालिकाका विभिन्न वडाका करिब ५८ सय घरधुरीमा खानेपानी सेवा पु¥याउने लक्ष्य सहित भइरहेको काम उपभोक्ताको सहमति अनुसार सञ्चालन गर्ने तथा त्यसको जानकारी उपभोक्तालाई दिइने आयोजनाले जनाएको छ ।
निर्माण भइरहेको आयोजनाको सुपरिवेक्षणको जिम्मेवारी पाएको टेक–आइकन ज्वाइनभेञ्चरका परामर्शदाता शरणहरि ज्ञवालीले तोकिएको मापदण्ड र पूर्व सहमति अनुसार काम नभएको प्रमाण सहितको गुनासो आएकाले बताउनुभएको छ । उहाँले आफुले हेर्दा पनि कम क्षमताको पाइप हालेको पाइएकोले छानबिन गर्नुपर्नेमा जोडदिनुभयो ।
यसरी एक ठाउामा अनियमितिा भेटिएपछि उक्त कम्पनीले अन्य स्थापनमा पुरेको पाईपको क्षमता माथी पनि उपभोक्ताहरूले शंका गरेका छन् । तल्लो पिपल्टारमा पानकिो पाइपको विषयमा राम्रो जानकारी रहेको एक उपभोक्ताको घर अगाडी पर्दै गरेको पाइप उनले हेरेपछि यो रहस्य बाहिर आएको हो । ति उपभोक्ताले कम क्षमताको पाइप नहाल्न आग्रह गर्दा पनि नमाने पछि स्थानीयहरूले दुई दिनसम्म काम रोक्न लगाएर प्राविधिक झिकाउनु परेको थियो ।
एशियाली विकास बैंक, नेपाल सरकार, नगर विकास कोषको लगानी रहेको सो आयोजना अबको एक वर्षभित्र पूरा गर्ने गरी निर्माण भइरहेको छ । आयोजनाको मुहानदेखि मूल ट्याङ्कीसम्मको पाइपलाइन विस्तार, मुख्य र सहायक ट्याङ्की निर्माण, ट्याङ्कीदेखि उपभोक्ताको घरसम्मको पाइपलाइन विस्तारको काम जारी छ ।
ठेकेदार कम्पनी टुण्डी कन्स्ट्रक्सन प्रालिले यो आयोजना र सडक विस्तारको आयोजनाको नाममा त्रिशुली र तादी खोलाबाट ढुङ्गा बालुवा अवैध रुपमा निकासी गर्दै आएको समेत स्थानीयहरूले बताएका छन् । सडक र खानेपानी आयोजनाको नाममा खोलामा थुपारेको सामाग्री विक्रिमा पठाएको र त्यो काम भन्दा बाहिर प्रयोग गरेको स्थानीयहरूले देखेका छन् ।
नदी तस्करीमा बृद्धि, रोक्ने कोहि भएनन्
विदुर÷नुवाकोटको त्रिशुली, तादी र लिखु नदीमा अवैध रुपमा स्काभेटर प्रयोग गरेर नदीजन्य सामग्रीको उत्खनन् नरोकिदा नदी आसपासका एकहजार रोपनी खेतियोग्य जमिन कटान हुनुका साथै पांच सय घरधुरी जोखिममा परेका छन् ।
नुवाकोटको त्रिशूली, तादी, सामरी र लिखु खोलासहित अन्य खानीबाट मापदण्ड विपरित रातको समयमा स्काभेटर प्रयोग गरेर नदीजन्य बस्तुको उत्खनन, चोरी र कालोवजारी बढेको स्थानीयवासी हरूले बताएका छन् ।
अवैध क्रसरलाई कारवाहीको माग गर्दै विदुर नगरपालिका वडा नं. ५ माझीटार, पिपलटार र वेलकोटगढी नपा वडा नं. १२ मालाकोट घोडघाडका स्थानीयले जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयमा अबैध कार्य रोक्नका लागि उजुरी दिएपनि कुनै सुनुवाई नभएको स्थानियहरूले बताएका छन् ।
जिल्ला समन्वय समिति नुवाकोटले असार, साउन र भदौ महिनामा नदीमा कुनै पनि उपकरण प्रयोग गरेर नदीजन्य सामग्रीको उत्खनन वन्द गरेको छ । तर, त्यसको उल्लंघन भइरहेको छ ।
नदीमा रातीको समयमा नदीमा अवैध रुपमा स्काभेटरको प्रयोग गरेर वालुवालगायतका सामग्रीको अवैध उत्खनन् भइरहेको वेलकोटगढी नपा वडा नं. ७ का वडाध्यक्ष हेमनिधी नेपालले बताउनुभयो । नुवाकोटका नदीहरूमा रातको समयमा ११ वजेदेखि विहान चार बजेसम्म अवैध रुपमा एकसय भन्दा बढी स्काभेटरले वालुवा झिक्ने गरेको स्थानीय वताउँछन् ।
त्रिशूली, तादी, लिखु, सामरीलगायतका नदीमा जिल्ला समन्वय समितिले असोज १ गतेपछि मात्रै खोला तथा खानीबाट नदीजन्य पदार्थ कानुन अनुसार उत्खनन् गर्न पाइने गरी ठेक्का लगाएको भएपनि रातको समयमा नदीबाट एक्साभेटरको प्रयोग गरी उत्खनन् भइरहेको विदुर नगरपालीकाका प्रमुख सन्जु पण्डितले वताउनुभयो । त्रिशूली खोलाको देवीघाटदेखि कोल्पुखोलासम्म र तादी खोलाको देवीघाटदेखि मालाकोट हुँदै थानसिङ, चौघडामा लुकीछिपी बालुवा तथा नदी जन्य पदार्थको उत्खनन् भइरहेकोमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले समन्वय गरि रोक्नु पर्ने बताउनु भयो ।
विभिन्न खोला नालाबाट दैनिक नदीजन्य वस्तु चोरी निकासी मौलाउँदै गएपनि प्रहरी प्रशासन भने मौन रहदै आएको छ । केहि समय अगाडी नदी उत्खनन् भएको र क्रसर ब्यबसायीहरूले निर्माण जन्य सामाग्रीहरूमा अत्याधिक भाउ बढाएको भन्दै नियन्त्रण र मुल्य निर्धारण गर्नको लागी समिति समेत बनेको थियो । समितिले नुवाकोटमा निर्माण जन्य सामाग्रीहरूको मुल्य निर्धारण गरेता पनी नागरिकह्रूले भने अत्याधिक दरभाउ तिर्न बाध्य भएका छन् ।
प्रहरी प्रशासनको संरक्षणमा दिनहँुजसो विभिन्न खोला नालाबाट खोला जन्यवस्तु चोरी निकासी हँुदै आएको स्थानीयवासीको आरोप छ । प्रहरीले कारवाहीका नाममा वालुवा वोकेका केहि ट्रिपर र स्काभेटरलाई नियन्त्रणमा लिएर धेरै ट्रिपरलाई उन्मुक्ति दिँदै आएको जनप्रतिनिधिको भनाई
तर, अवैध कार्य गर्ने जोसुकैलाई पनि कारवाही गर्न तयार रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय नुवाकोटका प्रमुख विरेन्द्रकुमार वस्यालले जानकारी दिनुभयो । अबैध नदी उत्खनन् हुन नदीनको लागी सम्भाबित स्थान वरपर रातको समयमा पनी प्रहरी परिचालन गर्ने गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय नुवाकोटले जनाएको छ ।
खसी बजार मेलामा ३० लाख रुपैयाँको कारोवार, भेडाच्या...
नुवाकोटबाट साहित्यमा नयाँ प्रयोग, रचना वाचन गर्नेल...